कोरोना भाइरसकाे परीक्षण काठमाडाैंमा सुरु - Nepali News Nepal
Nepali News Nepal
Bishwaghatana Online Nepali News portal from Nepal ( aajako samachar ).
कोरोना भाइरसकाे परीक्षण काठमाडाैंमा सुरु
जनवरी 28, 2020 जनवरी 28, 2020 Bishwaghatana0Comments इबोला, एभियन इन्फ्लुएन्जा, काठमाडाैं, कोरोना भाइरस, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, स्वाइन फ्लु
१४ माघ २०७६ काठमाडौँ: नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण परीक्षण सुरु गरिएको छ । काठमाडौंको टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षण सुरु गरिएको प्रयोगशालाले जनाएको छ ।
भाइरस परीक्षण गर्न आवश्यक पर्ने रसायन उपलब्ध भएपछि परीक्षण सुरु गरिएको हो । रसायन उपलब्ध नहुँदा यसअघि प्रयोगशालाले बिरामीको नमूना हङ्कङ पठाएको थियो । प्रयोगशालाका प्रवक्ता राजेशकुमार गुप्ताले रसायन आए लगत्तै दुईजनाको नमूना सङ्कलन गरी परीक्षण सुरु गरिएको बताउनुभयो । उहाँले दुबैजनाको स्वास्थ्य प्रतिवेदन मङ्गलबार आउने जानकारी दिनुभयो ।
स्वाइन फ्लु, एभियन इन्फ्लुएन्जा, इबोला लगायतका भाइरसको संक्रमण जाँच्ने उपकरण ‘पोलिमराइज चैन रिएक्शन’ पीसीआर हो ।
भाइरसको समूह बमोजिम रसायन आवश्यक पर्ने हुँदा विश्व स्वास्थ्य संगठनसँगको समन्वयमा उक्त रसायन नेपाल भित्र्याइएको हो । प्रवक्ता गुप्ताले पर्याप्त रसायन उपलब्ध भएको बताउनुहुँदै थप रसायनका लागि टेण्डर प्रकृया सुरु गरिने बताउनुभयो ।
हालसम्म नेपालमा एकजनामा मात्रै कोरोना भाइरसको संक्रमणको पुष्टी भएको छ । अर्को दुई जनामा संक्रमणको सम्भावना देखिएको छ । दुबैजनालाई शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालमा भर्ना गरी उच्च निगरानीमा राखिएको छ । दुबैजनाको स्वास्थ्य जाँचको लागि ‘थ्रोट स्वाब’को नमूना सङ्कलन गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पठाइएको छ । प्रयोगशालाले मङ्गलबार प्रतिवेदन तयार हुने जनाएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले परीक्षणका लागि मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । मापदण्ड बमोजिम ‘थ्रोट स्वाब’, ‘ओरोफ्यारिंक्स’, रगतको नमूना लिएर पीसीआर उपकरणमार्फत् नोबल कोरोना भाइरसको संक्रमण रहे/नरहेको छुट्याइन्छ ।
प्रवक्ता गुप्ताले सबैभन्दा उपयुक्त, सहज प्रकृया ‘थ्रोट स्वाब’को नमूना लिनु नै रहेकोले परीक्षणका लागि उक्त विधि अपनाउन लागिएको उल्लेख गर्नुभयो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रारम्भिक चरणमा चीनको वुहान शहरबाट आएकालाई मात्रै परीक्षण गर्ने मापदण्ड बनाएको छ ।
जस अनुसार बिरामीको विगत् हेरेर मात्रै नमूना सङ्कलन गरिनेछ । वुहानबाट आएको र प्रारम्भिक लक्षण देखिएपछि मात्रै परीक्षणको लागि नमूना लिने प्रयोगशालाले जनाएको छ । केही दिनसम्म उक्त प्रकृया चलेपछि संक्रमितको संख्या हेरेर अन्यको लागि नमूना परीक्षण खुला गरिने तयारी गरिएको प्रवक्ता गुप्ताले प्रष्ट्याउनुभयो ।
यसअघि सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैल्न नदिन उच्च सतर्कता अपनाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
← रोनाल्डो बने लगातार आठ खेलमा गोल गर्ने खेलाडी
विश्व क्रिकेट लिग २को लाइभ, खेल तालिका र टिकेट मुल्यको सम्पूर्ण जानकारी →
आइतबार थप २९३ मा संक्रमण पुस्टि, काठमाडौँमा थपिए २७ जना
जुलाई 5, 2020 जुलाई 5, 2020 Bishwa Ghatana 0
झापामा एकजनामा कोरोना भाइरसको आशङ्का
मार्च 15, 2020 मार्च 15, 2020 Bishwa Ghatana 0
भ्यालेन्सियाका डिफेन्डर इजिगेलसहित पाँच खेलाडीमा कोरोनाको संक्रमण
मार्च 16, 2020 मार्च 16, 2020 Bishwaghatana 0
हत्या गरी शरीर टुक्रा पारी फालेको अभियोगमा पक्राउ
अगस्ट 11, 2020 अगस्ट 11, 2020 Bishwa Ghatana 0
हत्या गरी शरीर टुक्रा पारी फालेको अभियोगमा पक्राउ २७ साउन २०७७ काठमाडौँ : गोंगबुस्थित एक होटलमा बस्दै आएका रोल्पा रुन्टीगढी
ठेला तथा साइकलमा व्यापार गर्न नपाइने
भारतबाट श्रम गर्न नेपाल आउन रोक
टाउको छुट्टाइएकाे अवस्थामा गोङ्गबुमा फेला परेको शव रोल्पाका कृष्णबहादुर बोहराको रहेको पुस्टि
लकडाउन गर्ने तयारीमा सरकार
प्रदेश ५ की सांसद केसीलाई कोरोना संक्रमण
वर्गहरु वर्ग छान्नुहोस Breaking English Tags अन्तरास्ट्रिय आजको राशिफल आर्थिक इन्फोटेक कर्णाली प्रदेश कोरोनाभाइरस क्रिकेट खेलकुद गण्डकी प्रदेश देश नागरिकता बिधेयक पत्रपत्रिका प्रदेश १ प्रदेश २ फुटबल बार्षिक राशिफल बिचित्र विश्व मनोरंजन मासिक राशिफल मौसम राजनिती राशिफल विकास विचार समाचार समाज साप्ताहिक राशिफल सिमा विवाद सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य
Copyright © 2020 Nepali News Nepal. All rights reserved.